Su'aal Twin Otter-P3D4.4
Bilood 2 6 maalmood ka hor #1441 by Argos
Muxuu fiicanyahay mataanaha Otter u imanaya P3D4.4!
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: abd
Bisha 1 3 todobaad ka hor #1457 by James6
Muuqaalada gudaha iyo dibaddaba aad bay u fiican yihiin, gaar ahaan aaladaha muuqda. Dukumiintiyadu waxay bixiyaan sharaxaad ku filan sida loo adeegsado badeecada iyo isku dayga duulimaadka. Codku waa dhab. Animations waa fiican. Waxbadan ayaa waxbadan ka soo kordhay badeecadan marka loo eego dusha sare.
Sidookale, Model farabadan:
Xamuulka Dabaqa DHC6-100
Rakaabka Dabaqa leh ee DHC6-100
DHC6-300 Rakaabka Roobka Tundra
DHC6-300 Standard Wheel Cargo (3 xayawaanka fidsan)
DHC6-300 Standard Wheel Cargo (4 xayawaanka fidsan)
DHC6-300 Rakaabka caadiga ah ee Gawaarida Naafada ah (3 blade prop)
Bisha 1 2 todobaad ka hor #1462 by MarioM
Fadlan, halka aad ka heli karto Mataanahaan Mataanaha ah ' P3Dv4?
Bisha 1 2 todobaad ka hor - Bisha 1 2 todobaad ka hor #1463 by James6
My mataanaha Otter wuxuu ka socdaa Carenado mana ahan bilaash.
Ma aanan u helin mid bilaash ah oo bilaash ah P3D4.4
Sida laga yaabo inaad ka warqabto Premair samee kuwa bilaashka ah ee bilaashka ah FSX iyo Rikoooo waxay sameeyaan moodada Premair sidoo kale.
Isbedelkii ugu dambeeyay: 1 bisha 2 todobaadyadii hore by James6.
Bisha 1 2 todobaad ka hor - Bisha 1 2 todobaad ka hor #1464 by deg020352
Waxaan isticmaalaa Aerosoft Twin Otter
Isbedelkii ugu dambeeyay: 1 bisha 2 todobaadyadii hore by deg020352.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.840